Insimbi Engagqwali Tube
Ukungeniswa kwensimbi kwaseChina kufinyelele ekuphakameni okusha eminyakeni yamuva nje, kukhombisa ukwanda konyaka ngonyaka cishe cishe ngo-160%
Ngenyanga edlule, ukungeniswa kwensimbi eChina kwenze irekhodi eliphezulu eminyakeni yamuva nje, okukhombisa ukwanda konyaka nonyaka cishe kuka-160%. Ngokwedatha ekhishwe yiGeneral Administration of Customs, ngoSepthemba 2020, izwe lami lithumele amathani ayinsimbi ayizigidi ezingama-3.828, okwenyuka ngo-4 ...Funda kabanzi »
I-European Union Steel: Kulindeleke ukuthi umkhiqizo wemboni yokusetshenziswa kwensimbi ye-EU uzokwehla ngo-12.8% unyaka nonyaka ngo-2020
Isikhathi Iposi: 08-25-2020
I-European Iron and Steel Union (i-Eurofer, ebizwa nge-European Iron and Steel Union) ngo-Agasti 5 yakhipha izibikezelo zemakethe zokuthi ukukhishwa kwazo zonke izimboni ezisebenzisa insimbi e-EU kuzokwehla ngo-12.8% unyaka nonyaka ngo-2020 bese kukhula ngo-8.9% ngo-2021. Kodwa-ke, i-European Steel Federation ...Funda kabanzi »
Ukungeniswa kwensimbi eVietnam kwehle ngo-5.4% engxenyeni yokuqala yonyaka
Isikhathi seposi: 07-16-2020
Ezinyangeni eziyisithupha zokuqala zalo nyaka, iVietnam yangenisa ingqikithi yamathani ayizigidi ezingama-6.8 emikhiqizo yensimbi, ngenani lokuqoqeka lokungenisa elingaphezu kwezigidigidi ezine zamadola aseMelika, okwakungokwehla kuka-5.4% no-16.3% uma kuqhathaniswa nesikhathi esifanayo unyaka. Ngokwe-Vietnam Iron and Steel Associati ...Funda kabanzi »
Ukuthuthukiswa kobuchwepheshe bokulwa nokubuyiselwa emuva kwetafula le-roller epholile emoyeni ukukhulisa isivuno sensimbi evelayo
Isikhathi Iposi: 07-14-2020
Kuyo yonke le nto, iXinxing Steel inamathela ebaluleke kakhulu kwikhwalithi yensimbi futhi ibheka ikhwalithi njengokuhamba phambili kokuqala. Lapha, lapho kusetshenziswa itafula lamaroli apholile asheshayo aphakeme omnyango wokugingqika weXinxing Iron and Steel Plant eXinjiang, uma inqubo elandelayo ihlangabezana nokuvela ...Funda kabanzi »
Umphumela wokushisa okucishayo ku-microstructure nezakhiwo zensimbi yesigaba esimbili
Isikhathi seposi: 07-03-2020
Njengegazi lezimboni, uwoyela unendawo ebalulekile isu lamandla. Isihluthulelo sokwandisa ukukhiqizwa kukawoyela ezweni lami ukuthuthukisa ubuchwepheshe bokumba uwoyela. Ubuchwepheshe beshubhu obunwebekayo ubuchwepheshe obusha obusha obukhiqiza uwoyela negesi obukhiqizwe futhi buthuthukiswa ekugcineni kwe ...Funda kabanzi »
I-European Union iqhuba uphenyo lokulwa nokulahlwa kwensimbi yaseTurkey, i-non-alloy noma enye imikhiqizo ye-alloy eshubile eshisayo
Isikhathi Iposi: 06-11-2020
NgoMeyi 14, 2020, iKhomishini yaseYurophu yakhipha isaziso esithi i-Eurofer, egameni labakhiqizi bemikhiqizo yensimbi eyisicaba esansimbi, engeyona ingxubevange noma amanye ama-alloys, yaba ngaphezu kuka-25% womkhiqizo ophelele ofanayo e-EU, ehlongozwe ngoMashi 31, 2020 I-European ...Funda kabanzi »
Inguquko Yezimboni Yensimbi Yensimbi Nensimbi "Iya Esikweni Uthole Ikhwalithi"
Ngaphansi kwengcindezi yokwehla komnotho wezwe, ukuguqulwa nokwenziwa ngcono kwemboni yensimbi akusona nje isidingo sokuthuthukiswa kwebhizinisi ngokwalo, kepha futhi kunesidingo sokuxazulula umthamo wokukhiqiza wensimbi okweqile nokususa imikhiqizo nezinqubo ezibuyela emuva. Njenge-st enkulu ...Funda kabanzi »
Isikhumbuzo seminyaka engama-60 seBaosteel Group sokukhiqiza insimbi siqongelele amathani ayizigidi ezingama-240 ensimbi
Isolezwe lithole ngeBaosteel Group ngoJuni 2 ukuthi njengoba insimbi engu-1 yezimba evulekile yeBaosteel Group yathintwa ngo-1960, iBaosteel Group yakhiqiza amathani ayizigidi ezingama-240 ensimbi eminyakeni engama-60. Ukukhiqizwa kwensimbi kweBaosteel Group kudlule ezigabeni ezintathu zemoto evulekile yokuphonsa ...Funda kabanzi »
I-Baosteel yaseChina inciphisa amanani ka-Eph
Isikhathi Iposi: 04-16-2020
Ngokwesimemezelo esivela eChina iBaosteel, enye yezinsimbi ezihamba phambili zensimbi emhlabeni, uBaosteel uthathe isinqumo sokwehlisa amanani entengo ngo-Ephreli. Ngaphambi kwalokho, imakethe yayiqiniseka kakhulu ngamanani amasha ka-Ephreli yiBaosteel, ikakhulukazi ngoba kwakukhona izinqubomgomo eziningana ezikhuthaziwe ...Funda kabanzi »
Intengo ye-nickel ye-LME ikhula ngo- $ 700 / ton ngoMashi 13
Ngokusho kwezindaba zemakethe, amanani entengo e-London Metal Exchange (LME) ngoMashi 13, ayenyuke ngo-US $ 700 / ithani, amisa ukwehla kwento. Ethintwe ukukhathazeka komhlaba wonke ngobhadane lwe-COVID-19, inani le-nickel ngesonto eledlule likhonjiswe ngokungathembeki, laze lehla laba ngaphansi kwama-US $ ...Funda kabanzi »
Ukungeniswa kwensimbi kweChina kushaye i-hig entsha ...
Ngenyanga edlule, ukungeniswa kwensimbi eChina kwenze irekhodi eliphezulu eminyakeni yamuva nje, okukhombisa ukwanda konyaka nonyaka cishe kuka-160%. Ngokwemininingwane ekhishwe yiGeneral Administration of Customs, kwaS ...